Iindaba seziXhosa, ngo 15:00, 20 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba seziXhosa, ngo 15:00, 20 eyoMga 2018
Kuthinjwe uBhelu lomsele kwilwandle zeliphondo
kuthinjwe into engaphaya kwamawaka amabini elitha zobhelu lomsele kwiilwandle zeliphondo lentshona koloni susela oko kwaqala inyanga kawayidlokova. ngokweengxelo ezikhutshwe lilungu lekomiti kasodolophu lokhuselo nokhuseleko kwisixeko sekapha uJP Smith banethemba lokuba basezakuthimba into eninzi kadlomdlayo nanjengoko lenyanga ifikelele kanye kuvuthondaba ukanti ukwalibhentsise phandle nelokuba baninzi abantu ababhungcayo kwizembe lokubanjelwa ukuzinkcinkca ngobhelu lomsele esidlangalaleni.
uZille uphika isiniki maxabiso esiwele kunyana wakhe
Inkulumbuso yephondo lentshona koloni uNkosazana Hellen Zille uzinyevulele ezichasa ngokukrakra iingxelo zomkhuseli woluntu uBusisiwe Mkhwebane zokuba ucangcathe ewugatya umgaqo wamagosa aphezulu. Kwingxubusho zokuphela konyaka lokaMkhwebane udize ukuba uZille uwutyeshele umgaqo siseko ngokuzibandakanya nomngcipheko wokufaka intandabuzo phakathi kweemvakalelo zakhe zokobuqu nezo zombuso. oku kulandela emveni kokuba umbutho kakhongolose ufake isikhalazo sokuba lokaZille uvumele ngabom unyana wakhe ukuba abenento yokwenza netablethi ebezithengwe lisebe lezemfundo ephondweni kodwa uphike wenma ngozwane ngelithi unyana wakhe akanikwanga ngqalelo ingaphezu kwabanye yaye ebezakuphatha nelinye ivolontiya elisemthethweni kwangohlobo olufanayo.
EFF ithyola SANEF ngokungcolisa umbutho wakhe
Umbutho weEFF utyhole iSANEF kwakunye nabanye bonookrawuzana ngokusebenzisana ngaxhathalinye nomphathiswa wamaqumrhu aphantsi korhulumente uPravin Godhan ukuze afake ibala elibi kulambutho. ngokweengxelo eziselugcinweni lambutho ukhe wasematheni kwiinkundla zamatyala
Uganda ibambe uNyazi ngezithuko azenzileyo ngakuMongameli wabo
igqiza elijongene namalungelo abantu kuzwelonke licel’umngeni amagosa aphezulu kwilizwe laseUganda ukuba zichithe amatyala nxamnye nesithwalandwe uStella Nyazi. lokaNyazi wabanjwa ngomhla wesibini kwinyanga ephelileyo kwisikhululo samapolisa ngethuba eyekwazisa iziphathamandla malunga noqhankqalazo azimisele ukulubamba kwidyunivesithi yaseMakerere. ngokweengxelo ezikhutshiweyo lokaNyazi sele ilityeli lesibini eli etyholwa ngokuthuka umongameli waseUganda uYoweri Museveni nokumnyibela amalungelo akhe ekhusi kumakhasi onxibelelwano
Linyukile inani lababhubha ezindleleni
Isebe lezothutho ephondweni linenkxalabo ngokwenyuka kwamanani abantu ababhubhela ezindleleni okuthe gqolo kulenyanga kawayidlokova xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. oku kulandela emveni kweengxelo ezikhutshiweyo zokuba lenyuke layakuma kumashumi asithoba anesibhozo inani labo babhubhileyo ezindleleni ukanti amashumi amane kulomaxhoba ngawempelaveki esiphuma kuyo kuphela.
Matrorail izakunciphisa amaxesha oololiwe kuleHolide
Inkampani uMatrorail eKapa ithi izakunciphisa amaxesha okuhamba koololiwe ngethuba leHolide ukusukela ngosuku lwangecawe ukuyotsho ngomvulo weveki ezayo. Ithi uloliwe osuka kwisitishi sasekapa uzaku hamba ngeyure ukusukela kwintsimbi yesihlanu ngentseni ukuyotsho ngentsimbi yesibhozo emalanga.Ukanti lenkampani izakongeza abanye ooLoliwe nabazakuthi basetyenziwe ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kulenyanga kwakunye nangmhla wokuqala kunyaka ka 2019.Bekwabongoza ukuba abakhweli bakaloliwe babaphathe kakuhle oololiwe kwaye phaphose iliso maxa onke kwabo bazama ukwenza ulwaphulo mthetho ngethuba besebenzisa esisithuthi ngelixesha leholide.ukanti kulindeleke ukuba oololiwe babuyele ekusebenzeni ngesiqhelo ngomhla wesine kwinyanga yomqungu kunyaka ka2019.